Ny Ny Torolàlana Nythendra - Emerald Nightmare Raid - Heroic | Tarika, nofy ratsy Emeraody | WoW Guides | WoW Guides
Nythendra Guide - Emerald Nightmare Raid - Heroic
Tongasoa eto amin'ny pejin'ny ady amin'ny Nythendra, voalohany Lehiben'ny andian-tsarety Emerald Nightmare. Amin'ity toro-lalana ity dia ho hitantsika ireo fahaiza-manao izay tsy maintsy hatrehintsika sy ny paikady tsotra indrindra handresena Nythendra amin'ny maody mahery fo. Mazava ho azy fa manan-kery ho an'ny fahasahiranana ambany kokoa ity torolàlana ity.
Nythendra dia tao anatin'ny Flight Green ary niandraikitra ny fiarovana ny World Tree, Shaladrassil. Rehefa nandany an'i Shaladrassil ny fahalotoan'ny Nightmare an'i Xavius ​​dia nianjera taminy ilay mpiambina natory. Ankehitriny i Nythendra dia tsy endriny hafa noho ny endriny taolam-bolo, mamaivay amin'ny areti-mandringana, vonona handrapaka zavaboary adala rehetra hiditra ao amin'ny akaniny.
Ny fofonain'i Nythendra dia mamoaka bibikely sy kolikoly mandany 50p. ny angovo. Rehefa lany ny herin'i Nythendra dia nirodana izy ary nanomboka nandefa ny fon'ny roalahy. Raha vantany vao tafapetraka tanteraka dia miangona ny endriny ary manohy ny fanafihana azy.
Dingana 1: Ilay mpanonofy tratry ny loza
Voan'ny aretina: Ny mpilalao voan'ny loharanom-pahavoazan'ny Pesta dia mahazo arofanina voan'ny areti-mifindra, 7000. Manimba ny areti-mandringana isaky ny 2 seg. Mikatona ity vokany ity. Amin'ny maody mahery fo dia esorina daholo ny rindranasa voan'ny aretina raha vantany vao vitan'i Nythendra ny Heart of the Swarm.
Tany voany: Mamorona faritra fanaovana kolikoly izay manimba 284438. Ny simba dia manimba isaky ny 1.5 sec ny olona ao anatiny.
Fofonaina voa: Namoaka bibikely misy poizina i Nythendra, ka niteraka fahavoazana 331845. Manimba ny areti-mandringana isaky ny segondra mandritra ny 5 seg. Ankoatr'izay, ny fofonainy dia manimba ny faritra ary mamorona faritra amin'ny Infected Ground.
lo: Loza 316945 p. Manimba ny mpiara-dia rehetra ao anatin'ny 8 metatra isaky ny 3 sec mandritra ny 9 seg. Rehefa lany izy dia miala amin'ny lasibatra ny kolikoly ary mamorona faritra amin'ny faritra voan'ny aretina.
Rot miovaova (tanky): Fihetsiketsehana hatramin'ny 1733720 p. Manimba ny mpiara-dia ny pesta aorian'ny 8 seg. Ireo mpiara-dia lavitra amin'ny fipoahana dia tsy dia manimba. Ankoatr'izay, ny fipoahana dia mamorona faritra marobe amin'ny Tany voan'ny aretina.
Dingana 2: Heart of the Swarm
Mivonto fo: Rehefa mahatratra 0 p. angovo, nirodana ny endrik'i Nythedra, ary 20 segondra ny fitaomany dia niteraka bibikely nivonto sy nandroaka ny Kolikoly in-3 alohan'ny hahafatesany.
Fipoahan'ny kolikoly: Loza 739539 p. Manimba ny mpilalao rehetra ao anatin'ny 8 metatra ny aretina pesta. Ankoatr'izay, ny residu misy poizina dia mampitombo ny fahasimban'ny Fipoahana kolikoly hatramin'ny 25% mandritra ny 5 seg. Mikatona ity vokany ity.
Ny fihaonana amin'i Nythendra dia tsotra tokoa raha ny fahaizana voafetra no ananany, saingy tsy maintsy mitandrina ny tsirairay amin'izy ireo isika satria mety hahafaty mora foana izany. Ity fivoriana ity dia mizara ho dingana roa izay homarihin'ny herin'i Nythendra. Hanomboka amin'ny dingana 1 isika, ilay mpanonofy tratry ny loza, izay hampiasain'i Nythendra angovo amin'ny fahaizany. Rehefa lany ny herin'i Nythendra dia nirodana izy ary nanomboka nandefa ny fon'ny olona.
Mandritra ny dingana 1, rehefa dinihina ny firafitry ny fanafihana mpilalao 30, dia hozarainay roa ny vondrona, izay hapetraka iray amin'ny lafiny roa amin'ny lehibeny ary tsy hifanakaiky loatra. Hanomboka ny lalao isika amin'ny fiatrehantsika ireto fahaiza-manao manaraka ireto:
lo, dia hanamarika tanjona kendrena afa-tsy ny fiara mifono vy, hoy ny tanjona tsy maintsy misaraka amin'ny tarika haingana araka izay tratra ary manandrana tsy mihoatra lavitra ny mpilalao hafa, na dia manana debuff aza izy dia manimba ny hafa. Rehefa afaka 9 segondra dia nipoaka ilay marika ary namela faritra iray Tany voany, izay tokony hivoahantsika haingana. Hametraka ireo tasy amin'ny gorodona ireo isika amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny sisin'ny efitrano ary hamela faritra tsy misy pentina foana ho an'ny fiovan'ny dingana.
Fofonaina voaNythendra dia mamoaka fofonaina amin'ny alàlan'ny bibikely ary, toy ny an'ny dragona rehetra, dia efa fantatsika fa tsy tsara ny mijanona hijery izay mitranga, marina? Izany no, ialantsika izany.
Nythendra dia manana fahaizana manokana natokana ho an'ny tanky, Rot miovaova. Tsy maintsy takalozin'izy ireo ny marika isaky ny marika ary hiala lavitra ny tarika araka izay azo atao satria mipoaka amin'ny fomban'ny Reaver ao amin'ny CFI ity debuf ity, miatrika fahasimbana marobe amin'ireo mpilalao eo akaiky eo, mihena lavitra izany fahasimbana izany.
Mandritra ny lalao iray manontolo dia tsy tokony hialantsika ny fahavoazan'ny pesta amin'ny vidiny rehetra, satria raha manao izany isika dia hahazo marika Voan'ny aretina cumulative. Tsy misy na inona na inona hahazoana marika iray fa raha ampiana be loatra izy ireo dia hofoananay ny mana an'ireo mpanasitrana antsika.
Rehefa reraka ny heriny dia nilatsaka i Nythendra ary nanomboka ny dingana 2, Heart of the Swarm. Mandritra io dingana io dia tsy maintsy mitady ny fahavelomantsika isika na dia ilaina aza izany dia hatsahatro ny fampijaliana ny sefo. Araka ny efa noresahintsika teo, dia namela faritra tsy misy pentina isika Tany voany. Izahay dia manao izany hanana faritra "azo antoka" amin'ny fiandohan'ny dingana 2. Ny faritra rehetra an'ny Tany voany Hotsitrihin'i Nythendra izy ireo saingy midika izany fa hifindra manodidina ny efitrano izy ireo ary tokony hialantsika izy ireo. Ho fanampin'izay, dia hahita karazana bibikely marobe manodidina ny efitrano izay hipoaka tampoka sy hanomboka Fipoahan'ny kolikoly, fiatrehana fahasimbana ho an'ny mpilalao rehetra manodidina. Zava-dehibe tokoa amin'ity dingana ity ny tsy hijanonana amin'ny fivezivezena, ivoahana ary ho tafavoaka velona. Raha mahomby isika dia hiverina amin'ny dingana 1 i Nythendra ary hiatrika ny fahaizany indray isika.
Ny faharetan'ity fihaonana ity sy ny isan'ny fotoana handehanany isaky ny dingana dia miankina amin'ny vondrona misy antsika sy ny fahasimbana. Hatsipintsika eo am-piandohan'ny fivoriana ny heorism satria io no fotoana tsy tokony hihetsika kely indrindra ary hanana efitrano madio ahafahana manararaotra tsara kokoa izany.
Manalavira ireo mpiara-dia aminao raha mbola eo ambany fitaoman'i lo.
Sorohy ny Fofonaina voa avy hatrany. Mampiasà fiarovana raha tsy manam-potoana hivoahana ianao.
Manalavira ireo bibikely mandritra ny dingana 2, jereo ny radara hisorohana ireo izay avoaka.
Tandremo manokana ireo mpilalao kendren'ny lo e Voan'ny aretina.
Ampifamadiho ny sefo amin'ny tanky hafa rehefa manana ny marika Rot miovaova ary mialà haingana amin'ny tarika.
Ary hatreto ny famintinana ny fivoriana dia antenaiko fa nanampy anao izany.
Miarahaba anao, Anänyx.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Bands » Nythendra Guide - Emerald Nightmare Raid - Heroic
Alao ny biby miafina an'i Dalaran: bitro vovoka
Curiosities of the Wow: Fizarana XXXI